Adobe Photoshop 7.0 नि:शुल्क र कानूनी रूपमा कसरी प्राप्त गर्ने
Photo Retouching Services > Retouching Blog > Nepali Blog > Photoshop 7.0 नि: शुल्क डाउनलोड
द्वारा Ann Young, Naveen Pokhrel 2022-04-29, Nepali Blog
यदि तपाइँ सोच्दै हुनुहुन्छ कि कहाँ र कसरी कानूनी Photoshop 7.0 नि: शुल्क डाउनलोड लिङ्क फेला पार्ने, मेरो लेखले तपाइँलाई त्यसको साथ मद्दत गर्नेछ। साथै, म Photoshop 7.0 को लागि धेरै नि: शुल्क विकल्पहरूको बारेमा बताउनेछु र Photoshop को बारेमा बारम्बार सोधिने प्रश्नहरूको जवाफ प्रदान गर्नेछु।
Photoshop 7.0 लाभहरू
चित्रमा धूलो, खरोंच, दाग र झुर्रियाँलाई बेअसर गर्दछ
WBMP को लागि समर्थन
वेब पारदर्शिता - वेब ग्राफिक्समा पारदर्शिता सुधार गर्न पारदर्शिता परिवर्तन गर्नुहोस्
भेक्टर छवि र पाठको स्पष्टता कायम राख्छ
पाठ समर्थन - खोज र प्रतिस्थापन संग हिज्जे जाँच प्रयोग गर्नुहोस्
Photoshop 7.0 कुन OS सँग उपयुक्त छ?
Photoshop 7.0 ले Windows 10 x64 मा कुनै पनि अनुकूलता मोडहरू प्रयोग नगरी काम गर्छ। केवल प्रमुख समस्या यो हो कि तपाईसँग हार्ड ड्राइभमा 1TB वा कम खाली ठाउँ हुनु आवश्यक छ। अन्यथा, Photoshop 7.0 ले काम गर्दैन।
फोटोशपको पूर्ण संस्करणको मूल्य कति छ?
Photoshop 7.0 अब Adobe द्वारा समर्थित छैन। तर तपाईले Adobe Photoshop 23.1 (नवीनतम संस्करण) $ 9.99 एक महिनामा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। एकचोटि तपाईंले कार्यक्रम खरिद गरेपछि, तपाईंले सबै प्रकार्यहरू प्रयोग गर्न र अद्यावधिकहरू प्राप्त गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
विशेष प्रस्तावहरू हेर्नुहोस्
के नि: शुल्क परीक्षणले macOS र Windows मा समान रूपमा राम्रोसँग काम गर्दछ?
नि:शुल्क Adobe Photoshop 7.0 परीक्षणले Windows 10 (64-Bit) वा Windows7(64-Bit), साथै macOS 10.15, 10.14 वा OS 10.13 मा समान रूपमा राम्रोसँग काम गर्दछ।
यो आधिकारिक वेबसाइट मा Photoshop 7.0 परीक्षण संस्करण डाउनलोड गर्न सम्भव छ?
होइन। यो संस्करण अब Adobe द्वारा समर्थित छैन, तपाईं न त पूर्ण संस्करण डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ न त परीक्षण संस्करण।
7.0 संस्करण प्रयोग गर्दा के फाइदाहरू छन्?
मुख्य फाइदाहरू मध्ये एक यो हो कि तपाईं सजिलैसँग शटमा साना परिवर्तनहरू गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं छालाको टोन परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ, उच्च रिजोल्युसनमा छविको प्रतिलिपि सिर्जना गर्नुहोस्, चमक समायोजन गर्नुहोस्, आदि।
पायरेटेड संस्करण Photoshop 7.0
यस समयमा, Photoshop 7.0 लाई कार्यक्रमको पुरानो संस्करण मानिन्छ, किनकि यो 18 वर्ष पहिले जारी गरिएको थियो, र तपाइँ यसलाई आधिकारिक वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्न। यस कारण, आधिकारिक संस्करण फेला पार्न झन् गाह्रो हुँदै गइरहेको छ।
हाल, त्यहाँ धेरै पायरेटेड साइटहरू छन् जुन पीसीको लागि Photoshop 7.0 डाउनलोडमा आधिकारिक लिङ्कहरू प्रस्ताव गर्दछ। तर तपाईलाई थाहा हुनुपर्दछ कि त्यस्ता साइटहरूबाट सफ्टवेयर डाउनलोड गर्दा धेरै नकारात्मक परिणामहरू निम्त्याउनेछन्। तपाइँ तपाइँको कम्प्यूटर मा भाइरस प्राप्त गर्ने र तपाइँको व्यक्तिगत डेटा र पासवर्डहरु को लागी पहुँच खोल्ने जोखिम चलाउनुहुन्छ। तसर्थ, भरपर्दो र गुणात्मक कामको लागि, म तपाईंलाई यस कार्यक्रमको इजाजतपत्र संस्करण प्रयोग गर्न र आधिकारिक Adobe पृष्ठमा डाउनलोड गर्न सल्लाह दिन्छु।
क्र्यास संग एक कार्यक्रम प्राप्त गर्ने सम्भावना
पायरेटेड Photoshop 7.0 संस्करणमा काम गर्दै, तपाईं दुर्घटनाहरूबाट बच्न सक्नुहुन्न। सञ्चालनको क्रममा, कार्यक्रम क्र्यास हुन सक्छ, र तपाईंले गर्ने कार्यहरू धेरै ढिलो हुनेछन्। साथै, ध्यान राख्नुहोस् कि यदि तपाईंले ह्याक गरिएको Photoshop 7.0 संस्करण प्रयोग गर्नुभयो भने, अद्यावधिकहरूले तपाईंलाई पास गर्नेछ।
भाइरस संक्रमणको खतरा
यदि तपाइँ टोरेन्टहरूबाट Adobe Photoshop 7.0 स्थापना गर्नुहुन्छ भने, तपाइँको कम्प्यूटर भाइरस र विभिन्न खराब कार्यक्रमहरूबाट संक्रमित हुन सक्छ। त्यस्ता भाइरस र कार्यक्रमहरूले नकारात्मक नतिजा ल्याउन सक्छ र तिनीहरूलाई छुटकारा पाउन गाह्रो हुनेछ। कार्यक्रमसँग काम गर्दा समस्याग्रस्त हुनेछ र कम्प्युटरलाई स्थिर बनाउँदछ। तपाईंले ह्याक गरिएको प्रोग्राम डाउनलोड र स्थापना गरेपछि तपाईंको कम्प्युटरमा आउने भाइरसहरूद्वारा महत्त्वपूर्ण फाइलहरूलाई क्षति पुर्‍याउने जोखिम पनि चलाउनुहुन्छ।
जब तपाइँ पाइरेटेड साइटहरु बाट पीसी को लागी फोटोशप डाउनलोड गर्नुहुन्छ, तपाइँ केवल भाइरस प्राप्त गर्नुहुन्न तर प्रतिलिपि अधिकार कानून को उल्लङ्घन पनि गर्नुहुन्छ। यस कारणले गर्दा, तपाइँलाई मौद्रिक जरिवाना वा न्यायमा ल्याउन सकिन्छ।
नि: शुल्क Photoshop 7.0 वैकल्पिक
यदि तपाइँ कुनै कारणले नि: शुल्क Photoshop 7.0 डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्न भने, म तपाइँलाई तल प्रस्तुत गरिएका यसको विकल्पहरूमा ध्यान दिन सल्लाह दिन्छु।
इन्टरफेस र उपकरणहरू फोटोशपमा जस्तै छन्
मास्क र तहहरूको लागि समर्थन
कुशल उपकरणहरूको व्यापक संख्या
45% कार्यक्षमता नि: शुल्क संस्करणमा सीमित छ
Pixlr उत्तम वेब-आधारित एपहरू मध्ये एक हो र नि:शुल्क फोटोशप डाउनलोडको एक सभ्य विकल्प हो। यदि तपाईंलाई Ps प्लग-इनहरूको अनुपस्थितिमा कुनै आपत्ति छैन भने, यो अनुप्रयोग तपाईंलाई आवश्यक पर्ने कुरा हो। एकचोटि तपाईंले तस्वीर अपलोड गरिसकेपछि, तपाईंले यसलाई सुधार गर्न तहहरू, क्लोन स्ट्याम्पहरू, मास्कहरू, चयन उपकरणहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
फोटोस्केप नि:शुल्क प्रयोग गर्नुहोस्
RAW ढाँचाको लागि समर्थन
व्यावसायिक तस्वीर सम्पादन उपकरण
डिजिटल ग्राफिक्स र रङ सुधारमा पहुँच
कार्यहरूको बहुमत नि: शुल्क पहुँचमा सीमित छ
PhotoScape अनुभवी र नौसिखिया प्रयोगकर्ताहरूको लागि फोटोशप 7.0 नि: शुल्क डाउनलोडको लागि एक अद्भुत विकल्प हो। यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई डिजाइन परियोजनाहरू सिर्जना गर्न, पोर्ट्रेटहरू सम्पादन गर्न, RAW फाइलहरूलाई रूपान्तरण गर्न, इत्यादि गर्न अनुमति दिन्छ। यसबाहेक, कार्यक्रममा भिडियो र GIF फाइलहरूसँग काम गर्ने तस्विर पोस्ट-उत्पादनका लागि छुट्टाछुट्टै ट्याबहरू समावेश छन्।
जिम्प फोटो सम्पादक नि:शुल्क प्रयोग गर्नुहोस्
लिनक्समा प्रयोग गर्न सकिन्छ
चित्र परिष्करणका लागि प्रो उपकरणहरू
मास्क, तह र प्रभाव
प्रदर्शन यसको एनालगहरूको भन्दा खराब छ
GIMP एक पूर्ण-विशेषतायुक्त खुला-स्रोत चित्र सम्पादक र एक उत्कृष्ट Adobe Photoshop विकल्प हो। यसमा तस्विर रिटचिङ, प्रकाश सुधार, लेयरहरूसँग काम गर्ने, मास्क, आदिका लागि धेरै उपकरणहरू छन्।
INKSCAPE नि: शुल्क प्रयोग गर्नुहोस्
भेक्टर ग्राफिक्सका लागि उल्लेखनीय उपकरण
कमजोर पीसीहरूको लागि उपयुक्त
RAW ढाँचा समर्थन गर्दछ
व्यावसायिक तस्विर सम्पादनको लागि होइन
कमजोर विकसित मास्क र तहहरू
Inkscape कलात्मक र प्राविधिक चित्रण दुवै सिर्जना गर्न को लागी एक कुशल कार्यक्रम हो। उपकरणहरूले प्रयोगकर्ताहरूलाई शटहरू रिटच गर्न, लोगो वा ब्यानरहरू उत्पादन गर्न र विभिन्न ब्रशहरू प्रयोग गर्न सक्षम बनाउँदछ। यो Photoshop 7.0 वैकल्पिक कुनै पनि भेक्टर ग्राफिक्स कार्यहरू प्रदर्शन गर्नको लागि पनि उपयुक्त छ।
BEFUNKY नि: शुल्क प्रयोग गर्नुहोस्
तस्विर सम्पादन उपकरणहरूको एर्रे
RAW फाइलहरूको लागि समर्थन
प्रभाव र सजावट तत्वहरूको एक विशाल चयन
BeFunky Photoshop 7.0 डाउनलोड को लागी एक उत्तम विकल्प हो। यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई चित्र पोस्ट-उत्पादनको लागि धेरै प्रभावहरू, बनावटहरू र उन्नत सेटिङहरू प्रदान गर्दछ। रंग सुधार र साना वस्तुहरू हटाउनको अतिरिक्त, कार्यक्रमले कोलाजहरू र ग्राफिक डिजाइनहरू सिर्जना गर्नका लागि छुट्टै ट्याबहरू समेट्छ।
Photoshop 7.0 मा सुविधाजनक कामको लागि, म तल प्रदान गरिएका कार्यहरू प्रयोग गर्न सिफारिस गर्दछु। यस तरिकाले, तपाईंले आफ्नो सिर्जनाहरू अद्वितीय र थप सुन्दर बनाउनुहुनेछ।
Photoshop 7.0 नि: शुल्क डाउनलोड गर्नुहोस्
Mac/Win/Linux को लागि Photoshop 7.0 नि:शुल्क डाउनलोड गर्नुहोस्
यो Photoshop 7.0 नि: शुल्क डाउनलोड प्राप्त गर्न सम्भव छ कार्यक्रमका सबै क्षमताहरू र अद्वितीय सुविधाहरू अन्वेषण गर्न। साथै, तपाईं आफ्नो रोचक परियोजनाहरू कसरी सिर्जना गर्ने सिक्न सक्नुहुन्छ।